ကမ္ဘာ့ အဆန်းကြယ်ဆုံး တိရစ္ဆာန် (၂၅) မျိုး – AnZarTone
၁၈။ Dumbo Octopus
Octopus ဆိုကတည်းက ရေဘဝဲ အမျိုးအစားထဲက တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ Dumbo ဆိုတဲ့ စကားကို ကြားဖူးကြမလား မသိဘူး။ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်လေးရဲ့ အမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်ပျံလေး Dumbo ပေါ့။ Dumbo Octopus တွေရဲ့ ခေါင်းအပေါ်ပိုင်းမှာ နားပုံစံနဲ့တူတဲ့ ရေယက်ကလေးတွေ ရှိပါတယ်။ Dumbo ရဲ့ နားရွက်တွေနဲ့ ဆင်နေလို့ ဒီ ဘဝဲလေးကိုလည်း Dumbo Octopus လို့ အမည်ပေးထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အတွင်းပိုင်း အကျဆုံး နေရာတွေမှာ နေလေ့ရှိပြီး Octopoda မျိုးစိတ်တွေရဲ့ အရှားပါးဆုံး မျိုးစိတ်တွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
၁၉။ Frill-necked Lizard
မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ပုတ်သင်ညိုလိုလို ဘာလိုလို အကောင်တွေပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ခေါင်းနဲ့ လည်ပင်းတွေမှာ ကြီးမားတဲ့ အရေပြားတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကပဲ သူတို့ကို Frill-necked Lizard လို့ အမည်တွင်စေတာပါ။ Frilled Dragon လို့လဲ ခေါ်ဆိုကြပါသေးတယ်။ Australia မှာတော့ Bicycle Lizard လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ အလျားအားဖြင့် တစ်မီတာ လောက်ပဲ ကြီးထွားနိုင်ကြပါတယ်။
Narwhal ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို Dictionary ထဲမှာ ကြည့်မိတော့ အာတိတ်ဒေသ ဝေလငါးဖြူလို့ ဖွင့်ဆိုထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Narwhal တွေဟာ တောင်လတ္တီကျူ့ ၇၀ ဒီဂရီ N မှာ တွေ့ရတဲ့ ရှားရှားပါးပါး သတ္တဝါတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဧရာဝတီ လင်းပိုင်တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေနိုင်ခြေ ရှိတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ Narwhal ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားဟာ ဒက်ခ်ျ စကားဖြစ်တဲ့ narwal က လာတာဖြစ်ပြီး narwal ဆိုတာကလည်း ဒိန်းမတ် ဘာသာစကား narhval ဆိုတဲ့စကားက လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အလောင်းကောင် လို့ ထွက်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အရောင်တွေကြောင့်ပဲ ဒီနာမည် ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း သူတို့ကို Moon Whale လို့ ခေါ်ကြပါသေးတယ်။
၂၁။ Sucker-footed Bat
Suck ဆိုတာက စုပ်သည်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ sucker-footed Bat ဆိုတော့ စုပ်တတ်တဲ့ ခြေထောက်တွေပါတဲ့ လင်းနို့ လို့ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် မှတ်လို့ရပါတယ်။ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ သူရဲ့ ခြေထောက်တွေနဲ့ နံရံကို တွယ်ကပ်နေပေမယ့် ကြောင်တွေလို လက်သည်း၊ ခြေသည်းတွေနဲ့ ကုပ်အားယူပြီး တွယ်ကပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ နာမည်အတိုင်း စုပ်ခွက်တွေလို တွယ်ကပ် ထားတာပဲ ဖြစ်မှာပါ။
၂၂။ Pygmy Marmoset
Pygmy Marmoset ဆိုတဲ့ မျောက်မျိုးတွေဟာ ဘရာဇီးလ် အနောက်ပိုင်း၊ ကိုလံဘီယာ အရှေ့တောင်ပိုင်း၊ အီကွေဒေါ အရှေ့ပိုင်းနဲ့ ပီရူး အရှေ့ပိုင်းက သစ်တောတွေထဲမှာ နေထိုင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ မျောက်အငယ်စား မျိုးထဲက တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ (အမြီးမပါ) အလျားအားဖြင့် ၁၄ စင်တီမီတာ ကနေ ၁၆ စင်တီမီတာ ကြားမှာပဲ ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လက်သည်း၊ ခြေသည်းတွေဟာ သစ်ပင်တွေတက်ဖို့အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသလား အောက်မေ့ရပါတယ်။ Pygmy Marmoset တွေဟာ အစုံစား သတ္တဝါတွေဖြစ်ပြီး သစ်သီး၊ သစ်ရွက်၊ အင်းဆက် တွေကို စားကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လျင်မြန်တဲ့ ရွေ့လျားမှုနဲ့ အရွယ်အစား သေးငယ်ခြင်းကြောင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေထဲမှာ သူတို့ကို စောင့်ကြည့် လေ့လာဖို့ ခက်ခဲစေပါတယ်။
Blob ဆိုတာ အရည်စက် လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ Blobfish ဆိုတော့ အရည်စက်နဲ့တူတဲ့ ငါးမျိုးပေါ့ဗျာ။ နောက်တစ်ခုက လူရဲ့ မျက်နှာနဲ့တူတဲ့ငါး၊ အကျည်းတန်တဲ့ ငါးမျိုးပါပဲ။ Blobfish တွေဟာ Australia နဲ့ Tasmania ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်းက ရေနက်ပိုင်းတွေမှာ နေထိုင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ သူတို့ကို လူတွေအနေနဲ့ မြင်တွေ့ဖို့ရန် ခက်ခဲပါတယ်။
Platpus တွေကို စတင်တွေ့ရှိတုန်းက သူတိုရဲ့ ဥဥနေတဲ့ အသွင်အပြင်ကြောင့် ပညာရှင်တွေ ခေါင်းရှုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ဟာ Tasmania အပါအဝင် Australia အရှေ့ပိုင်းမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ရေပျော် နို့တိုက် သတ္တဝါတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀ ရာစုနှစ် အစောပိုင်း မတိုင်ခင်က သူတို့ရဲ့ အမွှေးတွေကို ရှာဖွေ ရောင်းဝယ်မှုတွေ အလွန်ပဲ များပြားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
သူတို့ဟာ ငှက်ကျားတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေတဲ့ ငှက်မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီး အလွန်ကြီးမားတဲ့ ငှက်မျိုးတွေ ဖြစ်ကြကာ Whalehead လို့လည်း ခေါ်ကြပါသေးတယ်။ Shoebill ဆိုတဲ့ အမည်ဟာ အလွန်တရာ ကြီးမားတဲ့ ရှုးဖိနပ်ပုံစံ နှုတ်သီး ဆိုတာက ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ massive shoe-shaped bill ပေါ့ဗျာ။ သူတို့ရဲ့ အမြင့်ဟာ ၄ ပေရှိပြီး၊ တောင်ပံတွေပါ ဖြန့်ပြီး တိုင်းမယ်ဆိုရင် ၇.၇ ပေလောက် ကျယ်ပါလိမ့်မယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီး အကောင်တွေဟာ မီးခိုရောင်ရှိပြီး၊ ငယ်တဲ့ အကောင်တွေကတော့ အညိုရောင်ရှိပါတယ်။ Shoebill တွေဟာ အာဖရိက အရှေ့ပိုင်းက အပူပိုင်းဒေသတွေမှာ နေထိုင်လေ့ရှိပြီး ဆူဒန်ကနေ ဇမ်ဘီယာအထိ ရှိတဲ့ ကြီးမားတဲ့ ရွှံ့ဗွက်ထဲမှာလည်း နေထိုင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ The God must be Crazy ဇာတ်ကားထဲက ငှက်ကြီးတွေဟာ Shoebill တွေများ ဖြစ်နေမလားပဲ။
၂၆။ Yeti Crab
Yeti ဆိုတာက နှင်းလူ၊ Crab ဆိုတာ ပုဇွန်လုံး ဒီတော့ Yeti Crab ဆိုတာ နှင်းလူနဲ့တူတဲ့ ပုဇွန်လုံး ဒါမှမဟုတ် ဂဏန်းလို့ အဓိပ္ပါယ် ရမှာပေါ့။ သူတို့ကို ကြည့်ရတာလည်း ဖြူဖြူ အမွေးတွေနဲ့မို့ ဒီနာမည် ပေးထားတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Teti Crab တွေကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်က တောင်ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာထဲမှာ တွေ့ရှိခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၂၅) မျိုး ဆိုပေမယ့် မူရင်း source မှာ ရေးထားတဲ့အတိုင်း ၂၆ မျိုးလုံးကိုပဲ ရေးထားပါတယ်။ http://divaboo.info/ ဆိုတဲ့ နေရာကနေ ကျွန်တော် တတ်သလောက်၊ မှတ်သလောက် ဘာသာပြန်ပြီး ဗဟုသုတအလို့ငှာ ဝေငှရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ အမှားအယွင်းရှိတဲ့ရင် ထောက်ပြပေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
This entry was posted in Blog and tagged world strangest animals. Bookmark the permalink.
← Software မသုံးဘဲ Website ကို Block လုပ်နည်း
2012 အတွက် အကောင်းဆုံး Free Antivirus များ →